ခင်ဦးသာ| December 28, 2012 | Hits:23,477
51 Responses LeaveaReply Cancel reply
mgmggyi December 28, 2012 - 6:28 pm kia မိုင်ခွဲလိုက်တာကုန်ရထာပါvidoရိုက် ထာတာရပါတယ်ဦးလနန်းဘာမမသိဘဲပြောနေတယ်ဧရာဝတီရေကုန်တွဲ၅တွဲနဲ့စက်ဂေါင်တလုံးလုံးဝသုံးမရအောင်ပြစ်စီးသွာတယ်အိမ်းဆောက်ပစ္စည်က ၁တွဲ ကုန်စုံးတွဲက ၄တွဲကုန်တွေလဲပြတ်စီးကုန်တယ် ၈မိနစ်စာvdoရှိတယ်ဘယ်လိုပိုရမလဲph 400002625
Reply mgmgnge December 29, 2012 - 11:36 pm You can keep it for souvenir.
Reply မျုိုးချစ် December 28, 2012 - 8:23 pm သောက်၇ှက်ကိုမရှိဘူးကွာ။မြေပြင်ကနေမနိုင်တော လေကြောင်းနှင့်တိုက်တော သူရဲဘောမကြောင်လွန်းဘူးလားကွာ။ကချင်ကိုအပြုပ်ဆိုတဲ့သဘောလား။
Reply boyman December 28, 2012 - 10:34 pm သတင်းဖတ်နေတဲ့ငါတို့တွေရော
Reply Salai Lian December 28, 2012 - 11:50 pm Zaw Htay was denying the use of helicopters in assault on the KIA. Now, he will deny that Thein Sein is using fighter jets on the KIA. Whatagovernment!
Reply pps၁၂၃၄၅ December 28, 2012 - 11:59 pm ပြည်တွင်းစစ် တွင် စစ်လေယာဉ်တွေ သုံးသည် ဆိုသည်မှာ လွန်ပါသည်။
Reply Mr Ye December 29, 2012 - 1:18 am လေယာဉ် ၄ စင်း နဲ့ တိုက်တာတောင် KIA စခန်းမကျဘူးဆိုတော့ တပ်မတော် လေက လေယာဉ်တွေက ပန်းနဲ့ လာပေါက် တာလား။
Reply pps၁၂၃၄၅ December 29, 2012 - 10:17 pm ပန်းနဲ့ပေါက် တာမဟုတ် ဘူး။ တေဇ သွင်းခဲ့တဲ့ expired rocket တွေ ကြောင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ လေတပ်သည်သာ မက လေကြောင်းရန်နှင့် အမြှောက်တပ် များလည်း expired များများစွာ အင်ထည့်ခံထား ရကြောင်းသိရပါသည်။
Reply kbrang awng December 29, 2012 - 6:52 am i like this wedsite
Reply Baw Goung December 29, 2012 - 7:19 amဵKIAနှင့်ကျောင်းသားတပ်မတော် အမြစ်ဖြတ်တိုက်နေပါပြီးပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိကျတဲ့တော်လှန်ရေအင်းအားစုတွေးအထူးသ
Reply Shwe Yoe December 29, 2012 - 7:50 am The Kachins are asking what was robbed from them. They are not asking what they do not deserve. They legitimately were entitled from the Pang Long Agreement. Now, they have been assaulted by the Thein Sein’s government. We the people are with the Kachins. If the current government is building the genuine democracy, no need to argue much. Federal Union is what we all want. It is not separation. It is notabad thing. Since day one, Thein Sein must tell the nation that he and his government are to build the federal Union. All of us have been on the same pace with the Kachins. Why is the government shelling and bombing our brothers and sisters? The Karen, the Shans, the Kayahs, the Rakhines, the Chins and the Mons have been asking for the same thing which is federal Union. It is notabad thing for the Burmans and for the nation.
Reply Lion King December 29, 2012 - 8:18 am နှစ်ဖက်စလုံးမှ အပစ်အခတ် အမြန်ဆုံးရပ်ကြပါ။ ဒေသခံပြည်သူတွေကို ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ စဉ်းစားပြီး အပစ်အခတ်ရပ်ပေးကြပါ။ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲများ အမြန်ဆုံးပြန်စနိုင်အောင် နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ မီဒီယာများက လှုပ်ရှားမှုအသွင်တစ်ရပ်ဖြင့် စုပေါင်းတောင်းဆိုဆောင်ရွက်သွားသင့်သည်ဟု ထင်ပါတယ်။
Reply pnwara December 29, 2012 - 8:30 am ဒီတိုက်ပွဲအတွက် ကုန်ကျမည့် စစ်အသုံးစရိတ်တွေကို ပညာရေး-ကျမ္မာရေး အတွက်သုံးစွဲလိုက်လျှင်- ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ- အခုတော့ ကိုယ့်တိုင်းရင်းသား ညီအကို တွေအချင်းချင်း တိုက်ခိုက် ပစ်ခတ်နေတာ -အဓိပ္ပါယ်မရှိတဲ့ လုပ်ရပ်ဘဲ-ဒီလုပ်ရပ်တွေနဲ့ ရှေ့ ဘယ်လိုဆက်သွားမလဲ- ပြည်သူ အားလုံးက တောင်းတနေတဲ့ တိုင်းပြည် ငြိမ်ချမ်းရေး- မျှော်တိုင်းဝေပြီ။ ငြိမ်းချမ်းရေးခေါင်းဆောင်ကြီးကလဲ ဂီတဖျော်ဖြေပွဲဖွင့်ပွဲ စကားပြောပေးရတာနဲ့ -နိုင်ငံတကာပွဲ စကားပြောပေးရတာနဲ့ ဆိုတော့ မအားရှာဘူး။ ဒီလိုမအားတဲ့ ကြားထဲက ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ပိုင်ခွင့် လိုင်စင် လုပ်ပေးဘို့ တောင် သူ့ မ ပါတီက ပါလီမာန်မှာ အဆိုတင်သွင်းတယ် ဆိုတော့ လုပ်နိုင်သမျှ လုပ်ပေးတာမဆိုးပါဘူး။ အခြောက်လို့ ခေါ်တဲ့ ဂေးတွေကို လိင်တူချင်း ထိမ်းမြားပိုင်ခွင့်တို့ဘာတို့ ပါ လုပ်ပေးနိုင်ပါစေလို့ တိုက်တွန်းသဗျာ
Reply zaw hsai December 29, 2012 - 8:47 am aung min real realy…badddddd….
Reply zaw hsai December 29, 2012 - 8:49 am Aung Min Lier….
Reply Myo Nyunt December 29, 2012 - 11:54 am KIA လနန် က အမြဲတမ်း ညာနေတာဘဲ, ရထား မိုင်းခွဲလိုက်
Reply swe htwe December 29, 2012 - 7:34 pm that’s right. Intention of KIA is doubtful and questionable. But people are only suffering. So,we ask peace for both sides.
Reply တရုပ်မ ကြောက် December 29, 2012 - 2:58 pm မင်းအောင်လှိုင်၊ ဦးသိန်းစိန်၊ ဦးအောင်မင်းတို့ စည်းဝါးညီညီ ယိမ်းကနေကြတာ မသိကြသေးဘူးလား။ ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ ကချင်အပြုတ်တိုက်ရေး စစ်ဆင်ရေးပဲ။ ဦးအောင်မင်း “ကြောက်”ရတဲ့ တယုတ်ရဲ့ ရေနံပိုက်လိုင်းစီးမံကိန်းအောင်မြင်ရေးအတွက်ပါ။
Reply Shan Lay December 29, 2012 - 4:12 pm Dear readers!
Reply Kawkasa December 29, 2012 - 9:48 pm Hey Shan Lay, do you know the meaning of federal union. It is neither one individual who suck military and get the power and confiscated people land nor selling country natural resources and stash them in their families AH.
Reply တရုပ်မ ကြောက် December 30, 2012 - 2:39 am တယုနဲ့စစ်ဗိုလ်တွေ ယုတ်မာတာ၊ အနိုင်ကျင့်တာ ဆက်မခံရအောင်KIA ကို အားပေးပါတယ်။ မြေပြင်တိုက် သေနတ်နဲ့ တိုက်လေယာဉ်ကို ယှဉ်ရဲတာ coward မဟုတ်ပါ။ ခေတ်အဆက်ဆက် KIA ကို မနိုင်ခဲ့တာ တိုက်လေယာဉ်လည်း မနိုင်နိုင်ပါဘူး။ လျှို့ဝှက်သိမ်းဆည်းထားတဲ့ မြောက်ကိုးရီးယားလုပ် အနုမြူဗုံးနဲ့ဆို KIA တပ်ဖွဲ့တွေ ပြုတ်ပြုတ်ပြုန်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် KIA စိတ်ဓါတ်ကတော့ အမြဲ ခိုင်မြဲနေမှာပါ။ KIA ကို လေးစားပါတယ်။
Reply အပြင်လူ December 30, 2012 - 1:24 pmိသတ်မတော် သတ်မတော် down down
Reply Tayoke December 30, 2012 - 1:59 pm Hahahaha! This was what all you got? It does not matter whether the Shans are majority or minority in Shan State, Shans are owners of Shan State. Kachins are the owners of Kachin State no matter how many non-Kachins migrate into Kachin State. You idiot people need to shut youth big mouths.
Reply swe htwe December 31, 2012 - 7:28 pm We heard that KIO ask Monkoe,Monpaw,some areas of Muse and kutkhine townships to be self-admistrated. How is it possible !! Moenyin,Monkaung,Bamaw and myitkina townships are not in the kachin hilly region at first. In 1950,states are constituted and U Nu,and hluttaw put these townships into the kachin state against the people living in these townships. As monnyin sarbwa is the history and people living in these townships mostly shan and burmese. Moenyin sarbwa has been ruling these towns since history begins. q
Reply မြန်မာပြည်သား December 31, 2012 - 12:58 pm တိုင်းပြည်တွင် တစ်ကယ်တန်း အရှုပ်ထုတ် ကြီး ဖြစ်နေသည်မှာ တပ်မတော်မှ အရာရှိကြီးများ ဖြစ်ပါသည်။
Replyakachin January 1, 2013 - 10:11 pm brother shan lay.. are youaShan coward ?….worry about your land, Shan state and your people …. we, the Kachin people are not asking for.money…asabegger. of course…we know the development of our people are important… but there are something which are more important than money and development in our life.. which are our land.,our right,our freedom, self-determination ….. all we ask for..is. to keep their promise.”Pang long agreement..”.. if you don’t know what Panglong agreement is .. don’t insult the people who are giving their live for their people and the blessing land
Reply nandarlin December 29, 2012 - 7:30 pm သူငယ်ချင်းတို့
Replyakachin January 1, 2013 - 10:24 pm who is the one who kill hundreds or thousands of innocent people in 1988?
Reply မင်းကြီးညို December 30, 2012 - 12:04 am ပြည်တွင်းစစ်တွင် လေယာဉ်ဖြင့်တိုက်သည်များရှိပါသည်။ သီရိလင်္ကာပြည်တွင်းစစ်တွင်အစိုးရ
Reply Wan Tha December 30, 2012 - 12:36 pm တော်လှန်ရေးနယ်မြေများ လက်လွှတ်ရသော်ငြား တော်လှန်ရေး မကျဆုံးနှိုင်။
Reply Tun Tun Ko January 2, 2013 - 11:01 pm ကရင့်တပ်ကို ကချင်တပ် နဲ့မနှိုင်းပါနဲ့ သမိုင်းကြောင်းအရ ကချင်တပ်ဟာ ဗကပ လက်အောက်ခံလုပ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ကရင်တပ်က လူမျိုးကြီးဝါဒကိုမုန်းပါတယ်၊ ဘယ်လူမျိုးစုငယ် တွေကိုမှ ရွာလုံးကျွတ်မသတ်ခဲ့ဘူး။ ဗမာတွေကို သတ်ချင်သတ်မယ်၊ ကိုယ်လူမျိုးကိုယ်ပြန်မသတ်ဘူးကွ။ ကချင်တပ် ခေါင်းဆောင်တွေက သူတို့အကျိုးအတွက်ဆိုရင် ဘ နဖူးလဲ သိုက်တူးတဲ့ ကောင်တွေ။ သာတဲ့ဘက်ကူးတဲ့ကောင်တွေ ကိုယ်လူတွေ ခွက်ပျောက်ရင်လဲ သူတို့သာကောင်းမယ်ဆိုရင် လဲမယ့်ကောင်တွေ မနှိုင်းပါနဲ့ကွာ
Reply Wan Tha December 30, 2012 - 2:13 pm သမ္မတရုံးသို့ အကြံပြု ပေးစာ။
၂။ ဗမာ့ တပ်မတော်အနေဖြင့်၎င်း၊ လက်ရှိအစိုးရသည်၎င်း တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအား အမှန်တကယ် လိုလားပါက ဗမာပြည်တွင်း စစ်ဆင်နေသော စစ်ဆင်ရေးအားလုံးအား ချွင်းချက် မရှိ ရပ်ဆိုင်းပြီး၊ တိုက်ခိုက်ရေး တပ်အားလုံးအား ချွင်းချက်မရှိ တိုင်းရင်းသား ဒေသများမှ ရုပ်သိမ်းပေးစေလိုပါသည်။
၅။ အထက်ပါ ၄ချက်သည် တိုင်းရင်းသားများနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရာတွင် အထိရောက်ဆုံးနှင့် အမြန်ဆန်ဆုံး ဖြစ်သကဲ့သို့ လက်တွေ့အပြုသဘောဆောင် လုပ်ဆောင်မှုများ ဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ရှေးရှုလျှက် . . .
Reply နေမျိုးသူ December 30, 2012 - 4:30 pm မင်းတို့သရဲဘောကြောင်တယ်ထင်ရင် မင်းလာတိုက်လိုက်လေ—- ပါစပ်ကပြောတာကလွယ် တယ်ဆိုတာမှတ်ထားပါ
Reply ဖိုးဝ December 30, 2012 - 6:05 pm ပြည်သူ့မျက်နှာဘယ်တုန်းကမှမကြည့်ဘူး။
Reply လဆိုင်း December 30, 2012 - 7:17 pm ဦးလာနန် … စာဖတ်ပရိတ်သတ်တွေ၊ ပြည်သူတွေကို ခင်ဗျား လိမ်လည်ပြီးလျှောက်ပြော နေတာတွေကို ခင်ဗျား ရှက်သင့်တယ်။ဒါများခင်ဗျားတို့ ကေအိုင်အေ က ၀မ်ပေါင်နိုင်ငံထူထောင်ကြချင်သေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ခင်ဗျားတို့ ကေအိုင်အေကို ဒီလိုလိမ်နေရင် ဘယ်လို ယုံကြည်ရမလဲ။နဲနဲတော့ ပြည်သူ တွေအတွက် စဉ်းစားပေးပါ အုန်း ခင်ဗျာ …။
Reply ချင့်ယုံ December 30, 2012 - 10:30 pm ဦးလနန်ပြောတာပဲယုံနေကြတာလား၊ သူပြောတဲ့ လေယာဉ်နဲ့လာပစ်၊လက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာ
Reply ချင့်ယုံ December 31, 2012 - 7:14 am ပြည်တွင်းစစ်လေယာဉ်မသုံးရလို့နိုင်ငံတကာဥပဒေမရှိပါ။KIA ကသူတို့အခြေအနေမကောင်းလို့ ၀ါဒဖြန့်လာတာပါ။ဦးလနန်ပြောတိုင်း သံယောင်လိုက်နေတဲ့သူတွေတွေ့နေရတယ်။ ကေအိုင်အေ ကသူတို့စစ်ရေးအသာစီးရတယ်ယူဆလို့ နိုင်ငံရေးမရှင်းပဲ စစ်ရေးမရပ်င်္နိုင်လို့ခေါင်းမာနေတာပါ။ဒါကချင်ပြည်နယ်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ပြသနာပါ။သူတို့စစ်ရေးနိမ့်မှ ဖြေရှင်းလို့ရမှာမို့ ဦးလနန်နဲ့ ဂွမ်မော်ပြောတိုင်းမယုံပဲ လောလောဆယ်ကချင်ပြည်နယ် အေးချမ်းသာယာရေးအတွက် လုပ်နေတာတွေကို အမြင်ကြည်ကြည်လင်လင်ထားပြီးမြင်ပေးကြပါ။
Reply မြန်မာပြည်သား December 31, 2012 - 5:34 pm Yah, There is no law in Myanmar. Especially for poor and minorities. Army leaders can do almost everything without laws.
Reply that tin December 31, 2012 - 12:11 pm လက်ခုတ်ဆိုတာတစ်ဘက်တည်းတီးလို.မမည်ပါ။စစ်တပ်ကတိုက်တာဘဲမပြောနဲ.ကေအိုင်အေကမိုင်းခွဲဖျက်ဆီးနေတာလည်းပြောကြဦး။မြေဇာပင်တွေကသနားစရာပါ။အပစ်ရပ်ကြပါ။
Reply pps၁၂၃၄၅ January 2, 2013 - 10:26 pm ဟုတ်ပါသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တပ်မတော် မကြိုက်တာ လုပ်မိ၍ထောင်ကျခဲ့ပါသည်။ ၈၈ခုနှစ်တွင် ပြည်သူများ တပ်မတော် မကြိုက်တာ လုပ်၍ သေရပါသည်။ ထို့အတူ တပ်မတော် ကို ဆော်ကားသော လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများလည်း တပ်မတော် က ဆော်ပါသည်။ သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း လက်ထက် တပ်မတော် ကို စော်ကား သော အင်အားကြီး တရုတ် အစိုးရ ကို တပ်မတော် က စစ်မကြေငြာခဲ့ သလို ဗိုလ်သန်းရွှေ လက်ထက် တပ်မတော် ကို စော်ကားခဲ့သော အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုလည်း တပ်မတော်မှ စစ်မကြေညာခဲ့ပေ။ ထိုအကြောင်းများကို ကြည့်၍ လက်ခုတ် ဆိုသည် မှာ တီးမှမြည်ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် အင်အားကြီး သူများကို ညင်ညင်သာသာတီးကြောင်း အင်အားနည်းသော ပြည်သူများကို အစိုးရမှ အားရပါးရတီးကြောင်း လေလာခံစားနိုင်ပါသည်။
Reply ငြိမ်းချမ်းမေ December 31, 2012 - 1:50 pm ကတိရှိမှု+ယုံကြည်မှု+ငြိမ်းချမ်းရေးကိုတကယ်လိုလားမှု+လုံခြုံမှု= အကျိုးတူစီးပွားဖြစ်မှု/နိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ငြိမ်းမှု
Reply ဖထွေးလေး January 2, 2013 - 11:23 am စစ်ဖြစ်ရင် နိုင်ဖို့ဘဲ အရေးကြီးတယ် ဘာနဲ့တိုက်တိုက်ကွ…
Reply pps၁၂၃၄၅ January 2, 2013 - 10:07 pm ဒီစစ်ပွဲပြီး ရင် စစ်တပ်ထဲမှာ အောင်မြင်သော စစ်ဗိုလ်များကို ရာထူးတိုးပေးရန် ရှိပြီးသား တပ်မတော်သားများကို အရပ်ဖက်သို့ပို့ရန် တပ်ချုပ်နှင့် သမ္မတကြီးတို့ ဆွေးနွေးနေကြောင်း သိရပါသည်။
Reply Patriotic January 3, 2013 - 1:57 am It is time to use anti-aircraft missiles to shoot down bully burmese aircraft.
Reply opportunist-hater January 3, 2013 - 8:04 pm Yes, your comment is totally right!
Reply aungmyomyat January 4, 2013 - 2:48 pm ကဲမပြောဘူးလို့နေတာ…ကွန်မန့်တွေဖတ်ရတာရော..စိတ်တိုင်းကိုမကျဘူး။ဘာတွေဖြစ်ချင်နေတာလဲပြော။တကယ်တိုက်မလား။ရှေ့တန်းကိုသွားကြ။ဘယ်သူကမှသေတာကိုမြင်ချင်မှာမဟုတ်ဘူး။ကချင်တွေဗုံးမခွဲဘူးလို့ဘယ်သူပြောလဲ။ကိုယ်တိုင်တွေ့လား။ကျုပ်ဘယ်သူဘက်မှမလိုက်ဘူး
Reply pps၁၂၃၄၅ January 4, 2013 - 7:23 pm you are right. သခင်အောင်ဆန်းသာ ရှိရင် မင်းအောင်လှိုင်တော့ တော်တော် အရိုက်ခံရမှာ။ အခုဆိုရင် ချီးထွက်နေလောက်ပြီ။
Reply စိုင်းနော်ခမ်း January 4, 2013 - 9:23 pm ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ် သိချင်ယင် ကချင် ပြည်နယ် မှာ ရှိတဲ့ ရှမ်းလူမျိုး တွေကိုသာ လာပြီး
Reply နန်းရင်းသား January 4, 2013 - 10:20 pm ကချင်ပြည်နယ်သား တွေကို မီးရထားနဲ့ ခရီးသွာတဲ့အခါဘေးရန်ကင်းအောင် စောင့်ရှောက်ပေးတာ
Reply စိုင်းနော်ခမ်း January 4, 2013 - 10:57 pm ကွန်မဲန်းတွေ သတင်းတွေ ဖတ်ပြီး ဘယ်သူ
Reply thanhtikesoe January 8, 2013 - 3:54 pm တိုက်ပွဲအခြေအနေကိုဖေါ်ပြပေးတာကျေးဇူးပါ